KITRA AFRIKANINA : Manantena vokatra tsara avy amin’ny Fosa Juniors ny Malagasy
Omaly alarobia 07 marsa tamin’ny telo ora hariva izao no nifandrangotra amin’ny Fosa ny ekipa AsPL Maorisianina, lalao savaranonando mandroso ho an’ny roa tonta io, raha ny alahady 18 marsa kosa no hatao ny lalao miverina eto Mahajanga. 7 mars 2018
Delegasiona miisa 32 no fantatra fa nanainga ny alatsinainy teo tao an-drenivohitra, ka 24 tamin’ireo dia mpilalao avokoa. Manatombo io isan’ny delegasiona io raha mitaha tamin’ireo fanafihana ekipa vahiny nataontsika malagasy hatramin’izay, noho ny fifanakaikezana amin’ity nosy Maorisy ity sy i Madagasikara ka tsy betsaka ny fandaniana ara-bola atao. Minitra vitsy talohan’ny fiaingana dia nampanantena vokatra tsara i Dax, kapitenin’i Fosa sy i Bob, mpanazatra tompon-toerana. Marihina fa ekipa roa izay mifankahalala ireto roa tonta ireto, satria dia ahitana mpilalao malagasy avy eto Mahajanga mihitsy ny As PL Maorisianina ireto ka mampiasa saina ny mpitia baolina kitra malagasy ny mety ho vokatra avy eo.
Na izany aza dia mirary soa ho an’ny Fosa Boeny izahay eto amin’ny ekipan’ny Ino vaovao Mahajanga. Na izany aza dia mbola misy lalao savaranonando roa sosona be izao no hiandry ny Fosa junior, raha tahiny ka tafavoaka amin’ity lalao mandroso sy miverina amin’ny ekipan’ ny Maorisy ity, izay vao hisintona ny tapakila amin’ny dingana manaraka hiantrehana ny tompon’ny amboaran’i Afrika amin’ity taom-pilalalovana ity. Ny Fosa raha tsiahivina dia efa nandavo ny Fc Leopard avy atsy Kenya no nahatafakarany tamin’ity dingana manaraka ity, koa dia andrasana ny vokatra avy amin’ny Fosa, izay antenain’ny kitra malagasy mihitsy noho izy hany tokana hiaro ny voninahi-pirenena, rehefa nadaboky ny ekipa Ougandais ny Cnaps sports andro vitsy lasa izay.